Home Wararka Farmajo Kama Tacsiyadeyn, kulamana Tukan Masaajidka Madaxtooyada Cabdicasiis Afrika. Sabab?
Farmajo Kama Tacsiyadeyn, kulamana Tukan Masaajidka Madaxtooyada Cabdicasiis Afrika. Sabab?
Waxaa xalay la dilay Cabdicasiis Afrika oo qaban jiray barnamijyo lagu ifinayo hawlaha shabaab, waxayna sheegteen inay iyagu dileen. Si kasataba ha ahaatee qof waliba maalinteeda ayey tageysaa oo ma jirto qof la hormain karo ama la dib dhigi karo, iyaga ama kuwa kale oo aan tuhmeyno waxay noqdeen oo kaliya sababtii.
Waxaasa yaable in Marxuumka lagula tukada salaadda Janaazada Masjidka Shuhaddaa oo ku yaalla dhabarka dambe ee Guriga uu Farmajo Villada ka dagan yahay, salaada Janaazadana kama qeyb galin, afkiisana uma kala furin ilaa iyo hadda.
Nin oday oo aan Salaadda Kadib la hadlay ayaan weydiiyey Rooble waa joogaye aaway Madaxweynihii Xilka ka dhamaaday oo deggan gurigan ku dhaggan Masaajidka? Wuxuu iigu jawaabay hadal yaab leh.
Wuxuu ii sheegay sheeko ahayd nin ayaa hadda ka hor waxaa xeray guulwadaayshii Maxamed Siyaad kadib markii uu ku riyooday Riyo Maxamed Siyaad ka horjeedda oo muujinaysa xanuunka lagu qabay. Markii uu soo baxay ayaa la weydiiyey ‘Hebelow ma riyootay intii aad Xerneyd mar kale si loogu celiyo jeelka ? Wuxuu ku jawaabay “ Walaalow la riyoodo la seexdo maka horreysoo? Oo uu ula jeeday meel aan ku seexan karo laiguma xerin. Marka maanta waxaan ku leeyahay ayuu yiri ninkii aan la hadlay “Salaad Janaazo la tukado waxaa ka horreysa in salaada Faradka ah la tukado”.
Hadalkaas waan ka naxay , 60 jir ummad Muslim ah hogaamiya oo maalinna lagu arag masaajid gurigiisa ku dheggan waxay ka mid tahay ciqaabta ummaddaan dulsaaran loogana gooynayo wixii ay galabsadeen.
Dad badan ayaa ku dooda in Maxamed Farmajo uusan tukan salaadaha, diinna uusan shaqo ku lahayn, inkastoo MOL aysan caddeyn u hayn hadalkaan, haddana rag culimo iyo odayaal dhaqameed isugu jira ayaa ka soo weriyey in marka la gaaro xelliga Saladda oo ay la joogaan dhowr jeer uusan la tukan Madaxweynaha xilkiisu dhamaaaday M Farmajo. Waxayna joogtaa ducaddii caanka ahayd “ Rabbiyow ha nagu sallidin dambiyadeenna dartood mid aan kaa cabsan noona naxariisaneyn”.Horay waxaan na looku salliday mid adeerkiis ah, Maxamed Siyad, oo kaga horreeyey kursigan iyo hadda oo Maxamed Farmajo nala ku salliday, iyagoo runtiina labadoodaba magacyada hore la wadaaga rasuulkii naxariista loo soo diray ee Nabiyullahi Muxammad csw.
Dhinaca kale, rabbi waxaa uu quraanka kariimka ah ku sheegay in qowm (dad meel deggan) aanu xaaladdooda badaleyn ilaa ay iyaga iska badalaan xaaladda ay ku sugan yihiin sida ku cad bartama aayadda 11aad ee Suuradda 13aad ee Quraanka Kariimka ah.
Haddaba xaalka waa ka sii darayaa sida uu maanta yahay oo qof qof dadka loo dilo magaalada Muqdisho waxaana la gaari doonaa heer raxan raxan naloo dilo annagoon wax dembi ah geysanin, waana sheekadii ahayd Warjiraaba Cakaaru iman ama run ku sug.
Nimaan Salaad tukan oo aan rabbi ka cabsaneyn oo aan naxariis lahayn in la sugaa inta uu ka xoogeysanyo isagoo loo jeedo inuu hayo jidkii uu ku xoogeysan lahaa waa feker doqonimo ah lagana wada shallayn doono dhawaan mucaaridka iyo shacabiba.